ကစားသမားဘ၀မှာ အသင်းဟောင်းကို ပထမဆုံး ဒူးထောက်ခဲ့ရတဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒို
အသင်းဟောင်းနဲ့တွေ့တဲ့ပွဲတိုင်း မရှုံးခဲ့တဲ့ Cristiano Ronaldo ရဲ့ မှတ်တမ်း ကျိုးပြတ်သွားပြီ
8 Nov 2018 . 4:00 PM
Cristiano Ronaldo ရဲ့ အသင်းဟောင်းနဲ့တွေ့တဲ့ပွဲတိုင်း မရှုံးခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်း ကျိုးပြတ်သွားပြီ
စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo ဆိုတာက အသင်းဟောင်းနဲ့ ပြန်ဆုံတဲ့အခါတိုင်း ခေါင်းမော့ရင်ကော့ပြီး လက်မထောင်နိုင်ခဲ့တာချည်းပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ သူ အောင်မြင်မှုမှတ်တိုင်တွေ စိုက်ထူခဲ့ဖူးတဲ့ Red Devil တို့ရဲ့ အလဲထိုးတာကို ခံခဲ့ရပြီ။ ပိုဆိုးတာက ကိုယ့်ပရိသတ်ရှေ့မှာ မန်ယူကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာပါပဲ။ စီရော်နယ်လ်ဒိုကလည်း ကံထူးတယ်လို့ ပြောရမလား။ သူ ကစားခဲ့တဲ့အသင်းတိုင်းကို ပြိုင်ဘက်အဖြစ် အမြဲ ဆုံတွေ့ခဲ့တယ်။
မန်ယူနဲ့ပွဲမတိုင်ခင် ချန်ပီယံလိဂ်မှာ စီရော်နယ်လ်ဒို ဂိုးပေါက်ပျောက်နေတာ ကြာနေပါပြီ။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းနဲ့ ကွာတားဖိုင်နယ် ဒုတိယအကျော့မှာ ဂိုးသွင်းပြီးကတည်းက (၅)ပွဲဆက် ဂိုးမသွင်းနိုင်ခဲ့ဘဲ အခု မန်ယူနဲ့ဒုတိယအကျော့ပွဲမှ ဂိုးပေါက်ပြန်တွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုက ခဏတာပါပဲ။ မန်ယူအသင်းက ပွဲပြီးခါနီး သွင်းဂိုးတွေနဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းကို အနိုင်ပြန်ယူခဲ့တယ်။ ဒီပွဲမတိုင်ခင် စီရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ သူ့အသင်းဟောင်း ဆုံတွေ့ခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းကို ပြန်ကြည့်ချင်ပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ မန်ယူကစားသမားဘ၀မှာ သူ ကစားသမားဘ၀ စတင်ရာ အသင်းဟောင်း စပို့တင်းလစ္စဘွန်းနဲ့ ၂၀၀၇-၀၈ ရာသီ အုပ်စုအဆင့်တုန်းက ပြန်တွေ့ခဲ့ပြီး မန်ယူက အိမ်ကွင်း (၂-၁)ဂိုး၊ အဝေးကွင်း (၁-၀)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့သလို နှစ်ပွဲစလုံး စီရော်နယ်လ်ဒို ဂိုးသွင်းခဲ့တယ်။
ရီးယဲလ် ကစားသမားဘ၀မှာလည်း ၂၀၁၆-၁၇ ရာသီတုန်းက စပို့တင်းလစ္စဘွန်းနဲ့ အုပ်စုအဆင့်မှာပဲ ထပ်တွေ့ခဲ့ပြီး ရီးယဲလ်အသင်းက နှစ်ကျော့စလုံး (၂-၁)ဂိုးနဲ့အနိုင်ယူခဲ့တဲ့အပြင် ဒုတိယအကျော့မှာ စီရော်နယ်လ်ဒို ဂိုးသွင်းခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ရီးယဲလ်ကစားသမားဘ၀မှာ မန်ယူနဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့တုန်းကလည်း ဒုက္ခပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ ၂၀၁၃ ချန်ပီယံလိဂ် ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့်မှာ မန်ယူနဲ့ ပြန်တွေ့ခဲ့ပြီး ပထမအကျော့ (၁-၁)ဂိုး၊ ဒုတိယအကျော့ (၂-၁)ဂိုးတွေနဲ့ အနိုင်ရခဲ့သလို စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ နှစ်ကျော့စလုံး ဂိုးသွင်းခဲ့တယ်။
စီရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ အသင်းဟောင်းတွေ ပြန်တွေ့တဲ့ ရေစက်က ဂျူဗင်တပ်စ် ကစားသမားဘ၀အထိ ပါခဲ့ပြန်တယ်။ ပထမအကျော့ အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်မှာ နိုင်ပွဲ ရခဲ့ပေမယ့် ဒုတိယအကျော့မှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့လို့ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ အသင်းဟောင်းတွေနဲ့တွေ့တိုင်း အနိုင်ရတဲ့မှတ်တမ်း ကျိုးပြတ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီမှတ်တမ်းအပြင် အသင်းဟောင်းကို စီရော်နယ်လ်ဒို ဂိုးသွင်းတဲ့ပွဲတိုင်း မရှုံးခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းပါ ရိုက်ချိုးခံခဲ့ရပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုက အခု ရှုံးပွဲကို သိပ်လက်မခံချင်တဲ့ပုံပါပဲ။ ပွဲအပြီးမှာ မန်ယူအသင်းဟာ နိုင်ပွဲနဲ့ မထိုက်တန်ပါဘူးလို့ မခံချိမခံသာနဲ့ ပြောခဲ့တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ အသင်းဟောင်းတွေနဲ့ပွဲတိုင်း လက်မထောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒို ဒီတစ်ခါတော့ ဦးကျိုးသွားပြီဖြစ်ပေမယ့် ဒီအသင်းက သူ့ကို လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်အောင် မြေတောင်မြှောက်ပေးခဲ့တဲ့ အသင်းဖြစ်နေလို့ ကျေကျေနပ်နပ်နဲ့ လက်ခံရမှာပါပဲ . . .
အသင်းဟောင်းနဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒို ပြန်ဆုံတွေ့ခဲ့တဲ့ ပွဲများ
19 Sep 2007 Sporting Lisboa v Manchester United W 0-1
27 Nov 2007 Manchester United v Sporting Lisboa W 2-1
2016/2017 Sporting CP – Real Madrid 1:2
2016/2017 Real Madrid – Sporting CP 2:1
13 Feb 2013 Real Madrid v Manchester United D 1-1
05 Mar 2013 Manchester United v Real Madrid L 1-2
23 Oct 2018 Manchester United v Juventus L 0-1
Photo:Whazupnaija,Fox Sports,Gulf News,footballgalaxy.Sports Illustrated,São Mateus News
Cristiano Ronaldo ရဲ့ အသငျးဟောငျးနဲ့တှတေဲ့ပှဲတိုငျး မရှုံးခဲ့တဲ့ မှတျတမျး ကြိုးပွတျသှားပွီ
စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo ဆိုတာက အသငျးဟောငျးနဲ့ ပွနျဆုံတဲ့အခါတိုငျး ခေါငျးမော့ရငျကော့ပွီး လကျမထောငျနိုငျခဲ့တာခညျြးပဲ။ ဒါပမေဲ့ ဒီတဈကွိမျမှာတော့ သူ အောငျမွငျမှုမှတျတိုငျတှေ စိုကျထူခဲ့ဖူးတဲ့ Red Devil တို့ရဲ့ အလဲထိုးတာကို ခံခဲ့ရပွီ။ ပိုဆိုးတာက ကိုယျ့ပရိသတျရှမှေ့ာ မနျယူကို ရှုံးနိမျ့ခဲ့တာပါပဲ။ စီရျောနယျလျဒိုကလညျး ကံထူးတယျလို့ ပွောရမလား။ သူ ကစားခဲ့တဲ့အသငျးတိုငျးကို ပွိုငျဘကျအဖွဈ အမွဲ ဆုံတှခေဲ့တယျ။
မနျယူနဲ့ပှဲမတိုငျခငျ ခနျြပီယံလိဂျမှာ စီရျောနယျလျဒို ဂိုးပေါကျပြောကျနတော ကွာနပေါပွီ။ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးနဲ့ ကှာတားဖိုငျနယျ ဒုတိယအကြော့မှာ ဂိုးသှငျးပွီးကတညျးက (၅)ပှဲဆကျ ဂိုးမသှငျးနိုငျခဲ့ဘဲ အခု မနျယူနဲ့ဒုတိယအကြော့ပှဲမှ ဂိုးပေါကျပွနျတှခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ ပြျောရှငျမှုက ခဏတာပါပဲ။ မနျယူအသငျးက ပှဲပွီးခါနီး သှငျးဂိုးတှနေဲ့ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးကို အနိုငျပွနျယူခဲ့တယျ။ ဒီပှဲမတိုငျခငျ စီရျောနယျလျဒိုနဲ့ သူ့အသငျးဟောငျး ဆုံတှခေဲ့တဲ့ မှတျတမျးကို ပွနျကွညျ့ခငျြပါတယျ။ စီရျောနယျလျဒိုဟာ မနျယူကစားသမားဘဝမှာ သူ ကစားသမားဘ၀ စတငျရာ အသငျးဟောငျး စပို့တငျးလစ်စဘှနျးနဲ့ ၂၀၀၇-၀၈ ရာသီ အုပျစုအဆငျ့တုနျးက ပွနျတှခေဲ့ပွီး မနျယူက အိမျကှငျး (၂-၁)ဂိုး၊ အဝေးကှငျး (၁-ဝ)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရခဲ့သလို နှဈပှဲစလုံး စီရျောနယျလျဒို ဂိုးသှငျးခဲ့တယျ။
ရီးယဲလျ ကစားသမားဘဝမှာလညျး ၂၀၁၆-၁၇ ရာသီတုနျးက စပို့တငျးလစ်စဘှနျးနဲ့ အုပျစုအဆငျ့မှာပဲ ထပျတှခေဲ့ပွီး ရီးယဲလျအသငျးက နှဈကြော့စလုံး (၂-၁)ဂိုးနဲ့အနိုငျယူခဲ့တဲ့အပွငျ ဒုတိယအကြော့မှာ စီရျောနယျလျဒို ဂိုးသှငျးခဲ့ပါသေးတယျ။
ဒါတငျမကသေးပါဘူး။ စီရျောနယျလျဒိုဟာ ရီးယဲလျကစားသမားဘဝမှာ မနျယူနဲ့ ဆုံတှခေဲ့တုနျးကလညျး ဒုက်ခပေးခဲ့ပါသေးတယျ။ ၂၀၁၃ ခနျြပီယံလိဂျ ရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့မှာ မနျယူနဲ့ ပွနျတှခေဲ့ပွီး ပထမအကြော့ (၁-၁)ဂိုး၊ ဒုတိယအကြော့ (၂-၁)ဂိုးတှနေဲ့ အနိုငျရခဲ့သလို စီရျောနယျလျဒိုဟာ နှဈကြော့စလုံး ဂိုးသှငျးခဲ့တယျ။
စီရျောနယျလျဒိုနဲ့ အသငျးဟောငျးတှေ ပွနျတှတေဲ့ ရစေကျက ဂြူဗငျတပျဈ ကစားသမားဘဝအထိ ပါခဲ့ပွနျတယျ။ ပထမအကြော့ အိုးလျထရကျဖို့ဒျမှာ နိုငျပှဲ ရခဲ့ပမေယျ့ ဒုတိယအကြော့မှာ ရှုံးနိမျ့ခဲ့လို့ စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ အသငျးဟောငျးတှနေဲ့တှတေို့ငျး အနိုငျရတဲ့မှတျတမျး ကြိုးပွတျခဲ့တယျ။ အဲဒီမှတျတမျးအပွငျ အသငျးဟောငျးကို စီရျောနယျလျဒို ဂိုးသှငျးတဲ့ပှဲတိုငျး မရှုံးခဲ့တဲ့ မှတျတမျးပါ ရိုကျခြိုးခံခဲ့ရပါတယျ။ စီရျောနယျလျဒိုက အခု ရှုံးပှဲကို သိပျလကျမခံခငျြတဲ့ပုံပါပဲ။ ပှဲအပွီးမှာ မနျယူအသငျးဟာ နိုငျပှဲနဲ့ မထိုကျတနျပါဘူးလို့ မခံခြိမခံသာနဲ့ ပွောခဲ့တယျ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈပါ အသငျးဟောငျးတှနေဲ့ပှဲတိုငျး လကျမထောငျနိုငျခဲ့တဲ့ စီရျောနယျလျဒို ဒီတဈခါတော့ ဦးကြိုးသှားပွီဖွဈပမေယျ့ ဒီအသငျးက သူ့ကို လူတဈလုံးသူတဈလုံးဖွဈအောငျ မွတေောငျမွှောကျပေးခဲ့တဲ့ အသငျးဖွဈနလေို့ ကကြေနြေပျနပျနဲ့ လကျခံရမှာပါပဲ . . .
အသငျးဟောငျးနဲ့ စီရျောနယျလျဒို ပွနျဆုံတှခေဲ့တဲ့ ပှဲမြား